Manhaj-kayga xagga qoraalka.
Th xarafka afaraad ee Alif ba’da. Tusaale cuthmaan.
Z xarafka kow iyo tobnaad ee Alif ba’da. Tusaale Zako.
Gh Xarafka sagaal iyo tobnaad ee Alif ba’da. Tusaale Baghdad.
Soo aroorinta macluumaadka.
Siirada Nabiga (scw) waxaan si wayn u tixraacayaa kitaabka “Raxiiqul-Makhtuum” waxaase jira inaan keeni doonno siyaadooyn -insha allah- ama aan ka tageyo wixii aan u aragno in laga maarmi karo, haddiise aan macluumaadka kasoo qaado meel aan ahayn kitaabkaan waxaan sheegi doonaa meesha aan kasoo qaadnay.
Taariikh-da kale ee ka dambaysa Siirada Nabiga (scw) dawlad walba waxaan sheegi doonaa kitaabka aan tixraaci doono iyo meeshii wixii macluumaad ah oo siyaado ah aan kasoo qaatay.
Nusuusta diinta xadiith-ka Nabiga (scw) waxaan sheegi doonaa kitaabka uu ku jiro iyo darajadiisa sixada iyo dacfiga hadba sida culumada Islam-ku ku xukumeen xadiith-kii aan waayo culumada Islam-ka ee waawayn wax ka hadley darajadiisa waan sheegi doonaa inaanan helin darajadiisa.
Aayadaha qur’aanka waxaan sheegi doonaa suuradaha ay ku jiraan iyo raqamkooda wixii ku saabsan xagga tafsiirka macnahooda waxaan kasoo qaadanayaa tafsiirka Al-imam Ibn kathiir oo ah mid ku habboon koobnaantiisa iyo xeeldheeridiisa awgeed.
Gabayada carabiga ah.
Dhismihii Kacbada (Masjidka Xaramka)
Sida Alle qur’aankiisa ku caddeynayo kacbada waxaa dhisay Nabiga Alle ee Ibraahiim iyo wiilkiisa Nabiga Alle ee Ismaaciil (cs) qisaduna waxay u dhacdey sidaan. Nabiyullah Ibraahiim asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dhulkaan loo yaqaan ceraaq (Iraq) Magaala yar oo saraan daanta galbeed ee wabiga furaat oo magaceeda la yiraahdo (Ara) waa meel hadda ku aaddan kufa agteeda waxaana jira looxaan dhulka laga soo faagay hadda oo laga helay warar faahfaahsan oo ku saabsan magaaladaan iyo qoyska Ibraahiim (cs) iyo xaaladooda diineed intaba.
Ibraahiim (cs) magaaladaan waa ka hijroodey dhinaca magaalada kale ee xaraan kadibna dhulkaan Falastiin halkaas oo uu ka dhigtay saldhigga wayn ee dacwadiisa, hadaba Ibraahiim (cw) wuxuu u bixi jiray safaro dacwo oo uu ku maray dhulka Falastiin oo dhan iyo meelo kale oo dunida kamida.
Safaradaan mid kamida ayuu Ibraahiim (cs) ku tagay dhulka masar, halkaas oo uu fircoonkii masar ka talinayey u dagay shirqool ka dhan ah Ibraahiim (cs) iyo Zawjadiisa sharafta badan ee (Saara). Shirqoolkaan oo ahaa Isku day uu fircoonkaani isku dayay kufsi uu la damcay Saara oo ahayd –mid lasiiyey quruxdii aduunka nuskeed- Alle shirqoolkaan waa ka badbaadiyey ayadoo fircoon uu ka arkay Saaro mucjizo wayn oo uu darteed aqoonsaday xariirka wayn ee Saara ay la leedahay Alle uuna qirtay fadligeeda iyo sharafteeda isla-markaana uu siiyay gabar shaqaale ah oo magaceeda la dhoho (Haajara) Saarana ay dhankeeda u guurisay gabadhii ninkeeda Nabiga Alle ee Ibraahiim (cs).
Ibraahiim (cs) wuxuu ku soo laabtay Falastiin asagoo Alle ka siiyay Haajara (Ismaaciil). Hadaba, dhalashada wiilkaan wuxuu masayr ka keenay Zawjada wayn ee Ibraahiim (cs) waa Saaree -inaysan ayadu dhali jirin darteed- ilaa ay Ibraahiim (cs) ku kalliftay inuu fogeeyo oo masaafuriyo Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil.
Ibraahiim (cs) wuxuu la safray Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil ilaa uu kalasoo galay dhulkaan Xijaaz uuna dajiyay geed wayn hooskii oo ku yaal tog aan beero lahayn oo u dhaw barxadda uu Alla u doortay inay noqoto Bayt-kiisa sharafta leh ee Xaramka oo markaa ah dalcad kor u dheer oo daadadku ka maraan labada dhinac.
Wuxuu dajiyay geed wayn hooskii oo ku beegan ceelka Zamzam-ka meesha uu ku yaal korkeeda mana jirin markaa cid ku nool eeryadaan biyona malahayn wuxuuna ag dhigey dambiil ay ku jiraan xoogaa timira iyo sibraar biyo ah waana iska tagay markuu wax yar ka dhaqaaqay ayuu gacmaha kor u qaaday asagoo Alle ka baryaya inuu kaligii ku halleeyay ugana tagay dadkaas meesha cidlada ah lagaga tagay kagana baryay Alle inuu ka dhigo meel dadka qalbiga kaga taal oo ay isagasoo shubmaan uuna ku irsaaqo dadka ku nool noocyada thimaarta si ay Alle ugu shugriyaan, duca dheer oo Alle ku sheegay qur’aankiisa suurado badan sida suuradda Ibraahiim dhamaadkeeda wuxuuna Ibraahiim (cs) isaga laabtay dhulkii Falastiin, isl-markiiba saadkii yaraa waa dhamaaday halkaas oo Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil gaajoodeen oomeenna markaas Alle uu usoo fatahay isha macaan ee Zamzam-ka naxariista iyo fadliga Alle taasoo u noqotay quud iyo wax ay gaajada ku moodaan. Qisadaanna waa qiso dheer oo lawada yaqaan.
Safaradaan uu Ibraahiim (cs) ku yimid kormeerka mid kamida oo ah intii Ismaaciil barbaaray kadib ayuu la kulmay wiilkiisa Ismaaciil asagoo leebab qoranaya geed wayn oo Zamzam-ka u dhaw hooskiisa, markuu arkay Ismaaciil aabihiis oo mudda dheer aysan is-arag wuxuu salaamay salaan ay isku burureen, waalid ilmihiisa aan mudda dheer arag iyo ilmo aan waalidkiis mudda dheer arag salaantood. Safarkaan ayaa Alle amray Nabigiisa Ibraahiim (cs) inuu dhiso masjidka Kacbada dalcaddaas uu Alle doortay korkeeda, markaasay bilaabeen dhismaha oo udubada u taageen, markay dhameeyeenna Alle subxaanah wuxuu Nabigiisa Ibraahiim amray inuu dadka ugu yeero inay usoo xajiyaan kacbadaan la dhisay marka waxaa la yiri Ibraahiim (cs) intuu buur dheer dhaladeed fuulay ayuu qayladiisa tan ugu dheer ku dhawaaqay “war dadoow Alle wuxuu idin saaray Xaj ee usoo xajiya kacbadiisa” qayladaan oo dunida daafaheeda gaadhay oo aduunkoo dhan laga maqlay.
Akhri Qaybat 2aad...
HORDHACA QAYBTA 2aad